Ny valin'ny batch dia afaka mampiasa fomba isan-karazany amin'ny fandefasana ny fizotrany. Ny sasany amin'izy ireo dia mampiasa overpressure na counter-pressure koa mba hiarovana ny fahamendrehan'ny kaontenera mandritra ny fizotrany (izany hoe: hitazonana ny fonosana tsy ho vaky satria miakatra ao anaty kaontenera ny mari-pana sy ny tsindry mandritra ny fizotrany). Ireo kaontenera henjana, toy ny kapoaka vy, dia mahazaka fahasamihafana lehibe eo amin'ny tsindry anatiny sy ivelan'ny fitoeran-drano, noho izany ireo karazana kaontenera ireo dia matetika tsy mitaky famoretana. Izy ireo dia azo zahana amin'ny tontolo setroka mahavoky 100% nefa tsy mampiasa fihoaram-pefy mandritra ny dingana fanafanana. Etsy ankilany, ny kaontenera malefaka sy somary henjana kokoa marefo kokoa dia tsy mahazaka ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry avo, ka ampidirina ao anaty valiny ny rivotra mba hanomezana fihoaram-pefy hitazonana ny fahamendrehan'ny fonosana mandritra ny fizotrany. Ireto karazana kaontenera ireto dia mitaky fomba fanaterana fomba fiasa mahery vaika kokoa toy ny rano, rano, rano na fandroana rano, fanitrihana rano na rafitra karazana rivotra-etona. Satria insulator ny rivotra, dia ilaina ny manetsiketsika na mampifangaro ny haino aman-jery amin'ny retort mba hisorohana ireo teboka mangatsiaka ao anaty masinina, ka hiantohana ny fizarana mari-pana tsara mandritra ny valisoa sy ny enta-mavesatry ny vokatra. Ity fampifangaroana ity dia tanteraky ny fomba samihafa amin'ny fantson-drano voalaza etsy ambony, na amin'ny alàlan'ny mpankafy raha toa ka misy ny valin'ny rivotra etona, ary / na amin'ny alàlan'ny fihodinan'ny mekanika ny insert / drum raha misy ireo milina fanakorontanana.
Ny famoretana dia zava-dehibe ihany koa amin'ny dingana mangatsiaka amin'ny fizotran'ny retort satria rehefa ampidirina anaty rano ny rano mangatsiaka dia mihintsana ny setroka noforonina tamin'ny dingana fanafana. Raha tsy ampy ny fampidirana ny famoretana ny rivotra mandritra ny fihenan-tsakafo, ny tsindry ao amin'ny retort dia mety hidina tampoka noho ny fianjeran'ny setroka ka miteraka toe-javatra banga ao amin'ilay valiny. Raha izany no mitranga, ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry eo amin'ny tontolo iainana ivelany sy ny tontolo iainana ny mari-pana / tsindry ao anaty kaontenera dia lasa be loatra ka nahatonga ny fitoeran-javatra vaky (raha tsy izany dia fantatra amin'ny hoe "buckling"). Ny fifehezana mazava tsara ny famoretana mandritra ny dingana voalohany amin'ny fampangatsiahana dia zava-dehibe mba hisorohana ny toe-javatra etsy ambony fa ny fanerena ny tsindry amin'ny dingana farany amin'ny fampangatsiahana dia zava-dehibe ihany koa mba hisorohana ny fanorotoroana ilay fitoeran-drano (na fantatra amin'ny hoe "panamaso") toy ny mari-pana sy mihena ny tsindry ao anaty kaontenera. Raha tsy mampihetsika na manimba ny otrikaretina bakteria ny fizotran'ny retort dia tsy manimba ny zavamiaina bitika mikraobazy rehetra izy io. Ny thermophiles dia bakteria mahazaka ny mari-pana mihoatra ny mari-pana mahazatra. Noho io antony io, ny vokatra dia tsy maintsy ampangatahina amin'ny maripana ambanin'izay hiterahana ireo zavamananaina ireo, ka miteraka fanimbana thermophilic.